Soomaaliya waa xubin kamida ah ururka jaamacada carabta – Radio Daljir
Abriil 7, 2018 10:01 b 1
Soomaaliya waa xubin kamida ah ururka jaamacada carabta waana xubintii 20aad ee ururkaas.
Dawlada soomaaliya waa dawladii ugu dambaysay ee gashay ururkaas,ilaa haatan. Waxa jira sababo aan uga mid noqonay ururkaas.inaga iyo dawladaha kale ee kujira U.J.C. Waxaan nahay dad walaalo ah oo meel kasta iskaga mid ah . Waxana ka mid ah meelaha aan iskaga midka nahay.
1.DHAQANKA:innaga iyo ummadaha carabtu waxaan nahay dad weligood walaalo aha, isku dhaqan ah. Oo isku dabeecad ah. Dhaqankaas isku midka ahi wuxuu ka yimaada intiisa badani. (B). DIINTA ISLAAMKA:Diintu waa xarig weyn oo iskuxira dalalka islaamka ah guud ahaan,Soomaaliya iyo Carabtuna Labaduba wax badan ayey kusoo dhaqmeen diinta islaamka ,iyadayna isku xukumaan,iskuna guursadaan,oo ay qoysma ku unkaan.Diintu sida ay farayso ayayna isugu naxaristaan. Waxaa kale oo ay keentay midnimada diinta islaamku waxbarasho iskumid ah. Fikrado,Shucuur,Yididiilo iyaguna isku mid ah. (T). DERISNIMADA IYO ISDHEXGALKA. Carabta iyo soomaalidu weligood derisbay ahaayeen,Waxay Wadaagaan Badda Guduudan,Taas oo aan had iyo jeer isaga gudbi jirney.Derisnimadaas iyo dhaqankaas isku midka ahi Waxay keeneen in ummadaheennu isdhexgalaan. Waxaa kale oo ay keentay inay isweydaarsadaan Waayo-aragnimada nolosha. Marka waxaan Oran karnaa Dhaqan ahaan isku dad baan.nahay isku ummad baan nahay.
2.DHAQAALAHA: Soomaalida iyo carabtu weligood Waxay lahayeen xiriir Dhaqaale,Waxay kala gadan jireen badeecadaha . Qolo waxay haysatay qolada kale ayaa ka qaadan jirey,sidaas ayu dhaqaaluhu isugu xirnaa hadda ka hor iyo haatan waa isku xiran yahay.
3.SIYAASADA. Xagga siyaasadda Anaaga iyo Carabtu iskaga mid baan nahay , isku cadow baan nahay, Cadowgayagu Waa guumeysiga na Wada qabsaday ee Aan sida dawajirka ah iskaga saarnay . Waxaan laso dagaalanay guumeysi .imberiyaaliyadda,Sahyuuniyadda(YUHUUDA)iyo midabtakoorma. Sidaas darteed siyaasad ahan xiliyadi guumeysiga waan isbahaysan jirnay . Waxaanu kamid ahayn dawladaha ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay.
4.XAGGA TAARIKHDA. Annaga iyo ummadaha carabtu intii aan jirney waa isniqiin,meelkastana xiriir baanka lahayn Ganacsiga diinta iyo siyaasadda isku midka ahna waxay noo abuureen taarikh isku xiran. Sidaas daraaded taarikhda Soomaaliya iyo Tan dawladaha carabtu waa mid isku mid ah . Oo aan marna la kala sooci karin.
5.ISKU HIILINTA. Haddi lagu soo duulo ummad ka mid ah ummadaha kujira jaamacada carabta inta kale way u hiiliyaan. Haddan tilmaan u soo qaato dagaaladii ka dhacay Bariga dhexe sanadihii 1956,1967 iyo 1973 ee dhexmaray carabta iyo Yuhuuda, gaar ahaan Masar iyo suuriya iyo Yuhuuda oo ay taageerayeen Guumeysteyaashi reer galbeedka,Ummadaha carabta ee kale iyo soomaaliya way u soo hiiliyeen dawladihii Carabta ahaa ee dagaalka galay. Annaga Soomaalida ah markii aan la dagaalameynay gumeysiga,Carabtu waxaa noogu hiiliyeen dad iyo duunyaba.
Kalaamudiin Saalax wuxu ahaa Nin geesi ah oo Masar udhashay ,wuxuuna ku dhintay dagaalkii gobannimadoonkii soomaaliya. Hadii aan taarikhda dib ugu noqonno Markii uu Axmad gurey la dagaallameyay Axmaarada iyo Dagaalladii Kaleba ,Carabtu iyagaa noo kaalmeeyey .
Waxyaalahaas oo dhan Marka aad eegtid waxaad arkaysaa in annaga iyo carabtu aan nahay dad walaalo ah oo meelkasta iskaga xiran, oo aan kala marmin,Madaxweyihi hore ee J.D.S . AUN maxamed siyaad bare wuxu yiri “‘,Tallabada ah Gelitaanka Jaamacada Carabtu waxay ahayd mid aan asiibnay,waana tii ugu qumanayd ee intii aan tallabo noocaas oo kale ah aan qaadnay”‘
W/Q: Samadoon Cumar
Ibrahim xusen mahad 6 months ago
Ururka j.c.waa imisaa dal?